Mpanamboatra Wholesale Pump Boom Wholesale ary mpamatsy | fotsiny
MODELY unit 29M 33M 37M
Halava ankapobeny MG 9900 10400 10400
Sakany ankapobeny MG 2350 2480 2500
Haavo ankapobeny MG 3650 3650 3650
Lanja manontolo kg 18495 21000 21000
Fahaiza-mamokatra Thoery m3 / h 60/80 60/80 75/118
Fanerena beton Max Mpa 13 / 7.6 / 12/8 12/8 10 / 6.5
Fotoana famonoana teôria min 23/28 23/28 23/28
Boribory / fikorotanana vita amin'ny varingarina MG 200 × 1650 230 × 1600 260 × 1600
Karazana rafitra Hydraulika Open Loop Open Loop Open Loop
Fanerena ny rafitra pumping Mpa 32 32 32
Volan'ny tanky L 550 500 600
Modely Chassis ShanXi / HOWO ShanXi / HOWO ShanXi / HOWO
Bas Bas MG 5200 5200 5200
Bika fiara 4 × 2 4 × 2 4 × 2
Modely maotera WP6.220E50 ShanXi / HOWO ShanXi / HOWO
Angovo maotera KW 162 199 162
Fenitra Emission GB V GB V GB V
Fahafahana tanky solika L 163 163 163
Max Speed Km / h 90 90 90
Ny varotra ataontsika dia eken'ny besinimaro sy azo itokisana ary afaka mihaona amin'ny faniriana ara-toekarena sy ara-tsosialy tsy miovaova ho an'ny vidiny ambany indrindra ho an'ny China 30m Boom Length Concrete Pump Truck for sale, mijery ny lavitra, fomba lava handehanana, miezaka tsy tapaka ho tonga rehetra mpiasa amin'ny zotom-po tanteraka, zato heny ny fahatokisana ary nametraka ny orinasanay nanangana tontolo tsara tarehy, mandroso entana, tsara kalitao voalohany orinasa maoderina ary miasa mafy!
Ny vidiny ambany indrindra ho an'ny China Truck Mounted Concrete Pump, 38m Truck Mounted Concrete Pump, novolavolainay ny hetsika sy ny fizotran'ny asa aman-draharaha ataonay mba hananan'ireo mpanjifantsika fidirana amin'ny karazany betsaka indrindra miaraka amin'ny tsipika faran'ny fotoana fohy indrindra. Ity ekipanay ity dia azon'ny ekipanay mahay sy za-draharaha tokoa. Izahay dia mitady olona te-hiara-maniry amintsika manerana an'izao tontolo izao ary miavaka amin'ny vahoaka. Manana olona izay mamihina rahampitso isika, manana fahitana, tia manitatra ny sain'izy ireo ary mandeha lavitra mihoatra izay noheverin'izy ireo fa azo tanterahina.
1. Rafitra fanaraha-maso herinaratra
Electronic System dia mandeha ho azy sy azo itokisana. Ary ny fitaovana elektrika lehibe dia avy any Schneider.
Ny rafitra fanaraha-maso elektronika dia misy karazana fitaovana fanaraha-maso roa: fitaovana fanaraha-maso ny birao sy fitaovana fanaraha-maso tsy misy tariby, izay misy ny fiasa mora ampiasaina, ny ergonomika azon'ny mpampiasa ary ny endrika bika. Ao anatin'izany, ny fitaovana fanaraha-maso lavitra tsy misy tariby dia fitaovana fanaraha-maso tsy misy tariby Apollo.
Ny rafitra fanaraha-maso elektronika dia misy fitaovana fampitandremana marobe izay afaka miantoka fiarovana azo antoka mandritra ny fiasan'ny milina.
Ny rafitra Boom dia mifototra amin'ny tahirin-kevitra marina mamaky ny famaritana singa voafetra, famakafakana mavitrika ary fitsapana.
Ny rafitra boom dia novokarina tamin'ny vy mahery vita amin'ny titanium ambany hery mahery. Ny fitaovana rehetra sy ny valiny dia mandalo ny fizahana tsy mitongilana 100% mba hiantohana ny fiarovana sy ny fahamendrehana ny fipoahana.
Ny boom dia manana rafitra fanaraha-maso miaraka amin'ny asan'ny fanonerana ny tsindry sy ny fahatsapana ny entana. Ary ny boom miendrika R dia azo ahitsy amin'ny ambaratonga dimy hafainganana. Noho izany ny boom dia afaka mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha mety ary afaka miasa tanteraka.
3. Rafitra tranga famindrana
Tranga famindrana no fitaovana nizara ny herin'ny motera. Izy io dia afaka mamindra ny angovo miovaova amin'ny maotera amin'ny chassis ka ny herinaratra avy amin'ny motera fanampiny dia azo alaina, ary ny angovo dia azo avotana amin'ny fomba mahomby.
Natao tamin'ny famakafakana singa voafetra, ny hopper dia matevina, matanjaka ary marin-toerana. Vokatr'izany dia azo halavaina ny androm-piainan'ny paompy sy piston.
Ny famolavolana hopper miendrika arc dia afaka misoroka ny joro jamba. Vokatr'izany dia azo hatsaraina ny fahombiazan'ny fandefasana beton, ary azo ahena ny fatran'ny fanakanana beton.
Ny vongan-tsindroka sy ny fivoahana miendrika S ary ny fivorian'ny faran'ny kely dia voaisy tombo-kase indroa, mba hisorohana ireo singa tsy ho simba sy ho simba amin'ny paty simenitra.
Fitaovana valizy 5.Multi
Ny soatoavina tsara indrindra amin'ny fandefasana-fahatsapana tsara indrindra dia ampiasaina hanatsarana ny fitoniana mandritra ny fiasa boom.
Teo aloha: WZ40-28 Deluxe Backhoe Loader
Manaraka: Diesel Trailer Concrete Pump HBT30.06.75R